I-Ultrasonic processor UIP2000hd - Ukusebenza Okuphezulu - I-Hielscher Ultrasound Technology
Iprosesa ye-ultrasonic i-UIP2000hd (20kHz, 2000W) iyinsimbi enamandla futhi eguquguqukayo ye-ultrasonic yokucubungula kwezimboni zeziphuzo. It isetshenziselwa izinhlelo zokusebenza, ezifana emulsification, Ukuhlakazeka & i-particle kahle, lysis & Ukukhipha noma I-homogenizing.
Naphezu kwamandla amakhulu eprosesa ye-ultrasonic UIP2000hd (2000 watts, 20kHz), le divayisi ye-ultrasonic ayidingi ukupholisa okungeziwe ngamanzi noma emoyeni ocindezelweyo. Idivayisi ingasebenza ngokuqhubekayo emoyeni, futhi. Umklamo oqinile we-transducer, owenziwe nge-stainless steel and titanium, wenza ukusetshenziswa ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu zothuli, ukungcola, amazinga okushisa aphezulu kanye nomswakama.
Ngokusho kokusebenza kudinga ukuthi i-generator itholakala ezindlini noma kwikhabhinethi futhi ifakwe izibonisi zokulawula kanye nokuxhumana okugesi.
Izicelo ezibalulekile zeprosesa ye-ultrasonic i-UIP2000hd yiyona yokuhlanza okujulile kwento eqhubekayo njenge izintambo, amateyipi namaphrofayela, zezingxenye ezilodwa noma amabhomu amakhulu. I-Sonotrodes ikhethwa ukufanisa nesicelo. I ukwelashwa kwe-sludge yokuthuthwa kwamanzi ukuze uthole isivuno esihle segesi, ukukhiqizwa kahle kakhulu Emulsions futhi ukumiswa, the Ukukhipha futhi I-homogenizing kanye ne ukunciphisa amagciwane yizinhlelo zokusebenza nale divayisi kakhulu. Sonotrodes efana ne-the cascatrode ™ ukuhlinzeka ngamandla okudingekayo ekwelapheni kwe-ultrasonic ketshezi. Amaseli egeleza ahambisanayo anikezwa ukuqhutshwa okuqhubekayo. Ukuvikelwa kwemisindo ye-sound ukugcwalisa uhlelo lwe-ultrasonic olusekelwe ku-UIP2000hd. Isithombe esingenhla, sibonisa uhlelo lokuhlukanisa lwe-24xUIP2000. Amandla ahlangene we-48kW asetshenziselwa ukucubungulwa kwe-approx. 6m³ / hr.
Uhla olubanzi lwezesekeli eziningi, ezifana ne-sonotrodes, ama-boosters kanye namaseli okugeleza atholakala ku-UIP2000hd. Ngokuhlanganiswa ne-sonotrode kanye ne-stand, ungakwazi ukunikela isampula be-sampuli ukuhlola ama-formulations ahlukahlukene ayenziwe ngempendulo yawo ku-sonication.
Ukuze kusetshenziswe ama-batches amakhulu kunama-5 amalitha, ngokuvamile siyancoma ukuthi sebenzisa i-reactor cell cell (i-flow mode) ukuze uthole ikhwalithi yokucubungula kangcono. Uma isetshenziswe nge-flow cell ungasebenzisa amasampula amakhulu ukuphindaphinda ukusetha ukuhlanganiswa phakathi kwamapharamitha, njenge-amplitude, ingcindezi kanye nokwakhiwa kwamanzi, kanye nemiphumela yokusebenza kanye nokusebenza kahle. Uma isetshenziselwa ukunikezwa kwezidakamizwa kumodi yokugeleza, i-UIP2000hd ingajwayelekile phakathi kuka-1.0 no-8.0L / iminithi (Izinga langempela lizoncika enkambisweni yakho). Njengoba i-UIP2000hd ikhona ibanga eligcwele lezimboni, ingaqhutshwa Amahora angu-24 ngosuku (24h / 7d). I-UIP2000hd ingahle isebenze cishe. 2 kuya ku-10m³ ngosuku. Ukuze uthole ukukhiqizwa okuphakeme okukhiqizayo, sincoma ukusebenzisa ama-multiple units noma enye yamadivayisi amakhulu amakhulu e-ultrasonic:
I-UIP2000hd yenzelwe futhi eyakhelwe ukukhiqizwa kwezohwebo. Le prosesa ye-ultrasonic idinga isondlo esincane, kulula ukusetha futhi kulula ukuhlanza nokuhlanza.
I-UIP2000hd ine-kakhulu ukusebenza kahle ekuguqulweni kwamandla kagesi abe oscillation mechanical of the sonotrode. Lokhu kusho, lokho amandla engeziwe idluliselwa emanzini, okuholela ku-a sonication kangcono. Ukusebenza kahle kwamandla we-UIP2000hd kufinyeleleke. 80-90% kusuka ku-plug yamandla ku-liquid (chofoza esithombeni ngenhla ukuze ukwandise ishadi).
Ukuphakama kwe-UIP2000hd kulawulwa ngekhompiyutha, ukuze ubukhulu bokududuza kwe-mechanical ultrasonic ku-sonotrode kuhlale ngaphansi kwazo zonke izimo zomthwalo. Ungashintsha ukuphakama kusuka ku-50 kuya ku-100% ku-generator nakwezinye izigaba ngokusebenzisa izimpondo ezihlukahlukene ze-booster. I-amplitude ekhethiwe ibanjwe njalo, ngenkathi iveza noma iyiphi into kunoma yikuphi ukucindezela. Lesi sici sikunikeza ukulawula okugcwele phezu kwepharamitha ye-sonication ebaluleke kakhulu: Ukulinganisa.
I-UIP2000hd ifakwe ohlakaniphile ukuvama kokuvama okuzenzakalelayo. I-generator ithola imvamisa yokusebenza enhle yokucushwa kwe-transducer-booster-sonotrode, ngokuzenzakalelayo. Lokhu kuholela ekusebenzeni kakhudlwana kwamandla jikelele nokuthembeka.
Ukuhlola nokuhlola ngezimiso ezinhle
Uma ungathanda ukuhlola i-UIP2000hd ngezinhloso zakho, ungakwazi ukuqasha zonke izinto ezijwayelekile ezimweni ezinhle. Ngaphandle kwalokho, ungaqhuba ukuhlolwa kwezinqubo zethu inqubo yokwelapha. Uhlu lwezisekeli ezijwayelekile lungatholakala ngezansi. Zonke izinto zivame ukufakwa esitokisini, ngakho isikhathi sokubeletha sifushane kakhulu. Sicela usebenzise ifomu ngezansi, ukuze cela isicelo noma i-UIP2000hd enezesekeli ezifanelekile.
I-Industrial Ultrasonic Processor UIP2000hd 2000 watts
imvamisa ye-ultrasonic i-20kHz, uhlelo lokuzenzakalela lokuvundisa imvamisa, i-amplitude engu-25 micron, i-amplitude eguqulwa kusuka ku-50 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, ne-interface yokulawula okude noma ukulawula kwe-UPC, i-3m cable transducer ku-generator, ngamathuluzi aphakanyisiwe, I-M14x1 I-230 Volts, AC, isigaba esisodwa, 13A, 50-60Hz
nge-seal ye-O-ring (2xNBR) ku-sonotrode, ububanzi be-100mm, insimbi engagqwali, ukuze isetshenziswe nge-sonotrodes BS2d18, BS2d22, BS2d34 noma i-BS2d40, ne-O-Ring (NBR) yokuqhubekela phambili ukugeleza amaseli FC100L1-1S noma FC100L1K-1S
i-reactor ye-stainless steel ehlulekayo, max. imigoqo engu-10, ye-UIP500hd eya ku-UIP2000hd ngokuhambisana ne-sonotrode flange nokuma kwe-ST2, i-NBR izindandatho, izingxube ze-tube (1/2″) ngesiqeshana
i-reactor ensimbi engenasici ngejacket yokupholisa, max. imigoqo engu-10, ye-UIP500hd eya ku-UIP2000hd ngokuhambisana ne-sonotrode flange nokuma kwe-ST2, i-NBR izindandatho, izingxube zezingxube (uketshezi 1/2″, ukupholisa 1/4″) ngesiqeshana
for flow flow cells FC100L1-1S noma FC100L1K-1S, ukunciphisa ivolumu yesiguquko, ukusetshenziswa nge sonotrode BS2d18 (F) noma BS2d22 (F), NBR izindandatho, insimbi engagqwali
Faka 34, ngamaseli okugeleza FC100L1-1S noma i-FC100L1K-1S, ngokunciphisa ivolumu yesiguquko, ukuze kusetshenziswe nge-sonotrode BS2d18 (F), BS2d22 (F) noma i-BS2d34 (F), i-NBR O-izindandatho, insimbi engagqwali
I-UIP500hd eya ku-UIP2000hd, isb ukuze isetshenziswe nge-stand ST2 namaseli wegeyimu FC100L1-1S noma i-FC100L1K-1S